Kismaayo News » Xuskii sanadguurada 5aad ee aas-aaska Jaaliyadda Jubbaland Norway iyo soo dhawayntii Dr. Gooni
Xuskii sanadguurada 5aad ee aas-aaska Jaaliyadda Jubbaland Norway iyo soo dhawayntii Dr. Gooni
Kn: Xalay oo ay taariikhdu ku beegnayd 07/01/2017 waxaa caasimadda dalka Norway, Oslo ka dhacday xaflad lagu maamuusay xuska sanadguurada shanaad ee aasaaska Jaaliyadda Jubbaland Norway. Waxaa sidoo kale xafladda casha sharaf loogu sameeyay Guddoomiyaha Gobolka Jubbada Hoose Mudane Dr. Cabdirashiid Cabdullaahi Cali “Gooni” oo Jaaliyadda marti ugu ahaa kulanka.
Jaaliyadda Jubbaland Norway waxa la aasaasay Jannaayo tobankeedii sanaddii 2012. Mudadii ay Jaaliyaddu jirtay waxay qabatay hawlo aan lasoo koobi Karin, Tusaale ahaan waxay Jaaliyaddu kulama kala gadisan la yeelatay wasaaradda Arimaha Gudaha ee Dalka Norway ayadoo si af iyo qoraalba ah ugu gudbisay baahida shacabka Jubbaland iyo doorka laga filayo in Norway ay ka qaadato. Jaaliyadda waxay Safaaradaha Maraykanka, Turkiga iyo tan Ingiriiska shirar kala qaateen kaalinka ay ka qaadan karaan dibudhiska iyo horumarinta dalka gaar ahaan Jubbaland oo baahi wayn looga qarabay dhinaca arimaha gargaarka bini’aadamka, waxay sidoo kale u gudbiyeen qoraalo xambaarsan macluumaadka ku aaddan arimahaan. Waxaa taas dheeraa shirar ay Jaaliyaddu la gashay Hay’ado kala duwan sida Hay’adda Arimaha gargaarka Norway Norad, Hay’adda NIS iyo Norwegian Church Aid.
Jaaliyadda Jubbaland Norway waxay qabatay xaflado lagu wacyi galinayo shacabka ka soo jeeda Jubbaland si ay uga qayb qaataan dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska dalka hooyo. Waxa ay Jaaliyaddu diyaarisay suugaan kala gadisan sida gabayo, heeso, geeraaro, guurowyo iwm. Bishii 9-aad 2013 waxay Jaaliyadda ka qayb gashay soo dhawayntii madaxwaynaha Jubbaland mudane Axmad Maxamed Isaam loogu sameeyay caasimadda Denmark Kobanhegan. Sisoo kale waxay Jaaaliyadda dhaqaale ku taageertay maamulka Jubbaland waxay kaloo taageero dhaqaale kaga qayb qaatay kobcinta iyo dardar galinta hawlaha Jaamacadda Kismaayo ayadoo kulan la qaadatay wafdigii u ololaynayay arintaas.
Xafladdan oo ay isugu ymaadeen dad gaaraya dhawr boqol ayaa waxaa daadihinayay Maxamed Cali Gurraase. Waxaa sidoo kale xafladda marti sharaf inoogu ahaa Guddoomiyaha Jaaliyadda DDSI Norway Mudane Xiis Muxumed Biixi. Mas’uuliyiintii khudbadaha ka jeedisay waxaa ka mid ah Guddoomiyaha Jaaliyadda Jubbaland Mudane Mukhtaar Macallin Axmad, Guddoomiyihii hore Jaaliyadda Cabdi Ibraahim Magan “Cirjiir”, Aqoonyahayn Cabdi Xiis Udan Wiilwaal, Suldaan Mursal, Cabdirisaaq Maxamed Barkhadle, Diiriye Maxamed Guure, Nabadoon Cabdiraxmaan Sanyare, abwaan Ciiro Axmad Xasan. Dhinaca Haweenka waxaa ka hadlay Khadiijo Cismaan Faarax “Khadiijo Dheer”, Faa’isa Xasan Cumar, Faduma Shukri iyo Faadumo Xuseen Faarax.
Dhinaca Borotokoolka iyo maamulka waxaa inoo qaabilsanaa Ganacsade Sare Axmaddey
Ugu danbayntii waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay kulanka mudane Dr. Cabdirashiid Cabdullaahi Cali “Gooni”.
Mukhtaar Macallin Axmad, Guddoomiyaha Jaaliyadda Jubbaland Norway